Daawada waa sheyga ama diyaarinta kahortaga, daaweynta ama ogaanshaha cudurka dadka iyo xoolaha. Iyada oo ku saleysan isha, daawada waxaa loo qaybin karaa daawooyinka dabiiciga ah iyo kuwa isku-darka. Daawada sidoo kale waxay ka hortagi kartaa cudurka, daweynta cudurrada, yareynta xanuunka, hagaajinta caafimaadka ...
Indhaha, loo isticmaalo in lagu isticmaalo fiber midab ama waxyaabo kale, ayaa loo qaybiyaa laba nooc - midabyo dabiici ah iyo midab isku-dhafan, oo ay ka mid yihiin midab-falcelin, midab dheecaan, midab-dheecaan, midab-dareere, dheecaanno dareeraha, dheecaanno is-beddela, midab kala-saar, dheeh aashito iwm. Pigment waa qalab budo ah ...
Waxyaabaha la isku qurxiyo: waxyaalaha loo isticmaalo jidhka bini-aadamka si loo qurxiyo, loo habeeyo, ama loo beddelo muuqaalka qofka, ama waxyaabo si loo nadiifiyo, loo miro, loo tirtiro, la saxo ama loo ilaaliyo maqaarka, timaha, ciddiyaha, indhaha, ama ilkaha. Kala-soocidda qurxinta; Waxyaabaha lagu kala soocay
Daabacaadda noocyada qalin
Daabacaadda qalinku waa shey muhiim ah oo loo adeegsado daabacaadda, waxayna kuusoo bandhigaysaa qaabka iyo qoraalka kujira alwaaxyada iyagoo daabacaya. Weelasha waxay ka kooban yihiin qaybaha ugu muhiimsan iyo qaybaha kaabayaasha ah. Xitaa isku-darka iyo isku-laabashada soo noqnoqda, waxay ku timaaddaa isu-dheellitirka viscosity. Waxay ka koobnayd ...
Dulsaarka: Nooc ka mid ah walxaha, dabiiciga ah ama isku-jirka ， dabiiciga ah ama sunta, ee isku xira laba qaybood ama in ka badan ama alaabo isku dhafan oo ah isku xirnaanta iyo isku xidhka. Waxa kale oo loo yaqaanaa xabagta. Marka la soo koobo, waa in lagu hayaa waxyaabaha isku harsan iyadoo la adeegsanayo isku xidhka ...
“FARSAMADA FARSAMADA” 9-MAALIYADA ARDAYGA EE MADAXWEYNAHA GARSOOR: 1- 5 DECEMBER 2019
Xaaladda dhaqaale ee xilligan jirta, ururrada wax soo saarku waa inay ka fekeraan dhinacyada muhiimka ah sida fahamka iyo qaadashada tikniyoolajiyadaha warshadaha ee cusboonaysiinta, iskaashi dheeraad ah / nashaadaadyo wada jir ah shirkadaha kale si ay uga shaqeeyaan moodello ganacsi oo cusub, jadwal u yeeshaan habab cusub oo abaabul ...